Nin lagu helay in ciyaaraha Premier league uu qarsoodi u iibinayay oo la xukumay | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Nin lagu helay in ciyaaraha Premier league uu qarsoodi u iibinayay oo la xukumay
Nin lagu helay in ciyaaraha Premier league uu qarsoodi u iibinayay oo la xukumay
Posted by: Ahmed Haaddi 28 days ago
Himilo – Steven King, ayaa lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah sanadkii 219kii kaddib markii Maxkamadda ku heshay dambi ah in uu si sharci darro ah u iibinayay ciyaaraha Premier league isaga oo aan heysan xuquuqda baahinta.
King, iyo laba nin oo saaxiibadiis ah laguna kala magacaabo Paul Rolston iyo Daniel Malone, ayaa lagu xukumay isku darkooda 17 sano oo xabsi ah,waxaana xukunkan uu ka mid ahaa kuwa ugu waqtiga dheer ee maxkamadaha UK soo saareen.
Waxaa uu iska dhigay Nin ruqsad ka heysta warbaahinta iibsatay baahinta ciyaaraha Premier League ee kala ah; Dreambox TV Limited, iyo Digital Switchover Limited, waxaana uu ka sameeyay malaayiin dollar barta Internetka oo uu ku sii baahin jiray.
Maxkamadda Warwick Crown, ayaa isniintii shalay amartay in uu iibsado xukunka inta ka dhiman iskana bixiyo $1Milyan oo doolarka Mareykanka ah.
Xiriirka Kubadda Cagta Ingiriiska ee FA ayaa xaqiijiyay arrinkan,waxaana ay sheegeen in ay lacagtaas dib ugu laaban doonto dadweynaha.
Waxyaabaha lagu xukumay ee kala waxaa ka mid ah in uu muddo 28 maalmood ah Baasaboorkiisa ku wareejiyo laanta socdaalka, in uusan dalka ka bixi Karin iyo haddii uu lacagtaas iska bixin waayo in uu wajahayo muddo kordhin xabsiga ah.
Xiriirka Kubadda Cagta Ingiriiska ayaa arrinkan ku tilmaamay natiijo ka dhalatay sharci darrada waxaana ay digniin siiyeen dadka kale ee ku howlan shaqooyinka noocan ah oo ay sheegeen in ay dabagal ku hayaan.
Previous: Shaqaalaha guryaha dhisa oo rusqeyn shaqo kala kulmaya wiishash
Next: Berlin: Bar-billowga mushkiladaha heysta Africa